:: My Little World ::: June 2010
အခု နားထောင်နေတဲ့ သီချင်း...
အခု ရက်ပိုင်း အလုပ်မှာ YouTube က သီချင်းတွေ နားထောင်လို့ ရနေတယ်။ ဟိုတလောက Server တွေ ရွှေ့ ပြီးနောက်ပိုင်း အင်တာနက် ပိုမြန်လာခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်။ သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်း အလုပ်တွေ လုပ်။ ဟုတ်နေတာပဲ။
P.S ဗိုက်ဆာနေတယ် ... ဒီနေ့ ဘာစားရင်ကောင်းမလဲ...
Posted by Nay Nay Naing at 6/29/2010 10:41:00 AM6comments
ပုံလေးက ချစ်စရာ မကောင်းဘူးလား။ အချိန်ရလို့ကွန်ပြူတာရှင်း၊ ဒီပုံလေးတွေ့ ၊ ပုံလေးကို ကြည့်ရင်း ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာ..... ကျေးဇူးပါပဲ..။
အလယ်.... ဒါမျိုးလေးတွေ ဆွဲတတ်ချင်တယ်။ ပါရမီ မပါဘူး။ စိတ်မရှည်ဘူး။
အဆုံးမသတ်သေးဘူး။ ဒီလို 10q ပုံလေးတွေ စုထားတာ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
Other Pictures: You are MY best friend..
Posted by Nay Nay Naing at 6/28/2010 03:03:00 PM4comments
မိုးရွာတဲ့ နေ့ တစ်နေ့ က ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံ။ ဒီနေ့ လည်း မိုးအတော်လေး သည်းသည်းမဲမဲ ရွာတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ မိုးက အစိုး မရဘူး၊ အခု နေပူနေတယ်၊ တော်ကြာ ချက်ချင်းကြီးဆိုသလို မိုးရွာချနိုင်တယ်။ မိုးရွာတဲ့ နေ့ တွေမှာ ရိုက်တဲ့ ပုံတွေက တိမ်ပြာပြာ နေသာတဲ့နေ့တွေမှာလောက် မလှဘူး။ ဒါပေမယ့် တမျိုးစီပေါ့။ အပြင်မှာ အဆက်မပြတ်ကျနေတဲ့ မိုးစက်တွေနဲ့ခပ်မှိုင်းမှိုင်းဖြစ်နေတဲ့ အဆောက်အအုံတွေကို လှမ်းကြည့်ရတာ တမျိုးလေး ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။ နေရာတာလည်း အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိတယ်။
Other Related Post : The City
( ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်း ရိုက်သည်။)
Posted by Nay Nay Naing at 6/23/2010 08:35:00 PM9comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/21/2010 10:30:00 PM5comments
ပြီးဆုံးခဲ့ အဖြစ်ပျက်တို့ အသစ်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူတာ မှန်ပေမယ့်
သူဘယ်မှာလဲ သတိရနေတယ် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လွမ်းမိပါတယ်...
ဟောင်းတဲ့အချစ် အသစ်ဖြစ်ဖို့ မတောင့်တလည်း စဉ်းစားတိုင်း နှမျောတမ်းတ လွမ်းဆွတ်လို့ ....
အချစ်ရဲ့အစ ဘ၀ကလူရည်မလည် အရွယ်ငယ်ငယ် ရိုးသားတဲ့ အသက်အရွယ်
ဟူး…. စကားပြောတတ်စ အသည်းနုနု အတွေးနုနု အချစ်ကလေးနုနယ်
ဟိုတုန်းကတော့ အသည်းက အဖြူရောင်ပါ ဝေဒနာရယ်.. ဆေးစက်တို့ စွန်းထင်
အိုး..…. စုတ်ချက်ကြမ်းကြမ်းရေးဆွဲခဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ ပန်းချီကား တစ်ချပ်ကွယ်
ခုတော့ဖြင့် တုို့နှစ်ယောက် တစ်နေရာစီ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အချစ်သစ်တွေ့ကြသည့်တိုင်
အိုး…. မမေ့နိုင်သေးတဲ့ အတိတ်ဘ၀က ..
သူဘယ်မှာလဲ သတိရနေတယ်…. တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လွမ်းမိပါတယ်...
ဟောင်းတဲ့အချစ် အသစ်ဖြစ်ဖို့ မတောင့်တလည်း စဉ်းစားတိုင်း နှမျောတမ်းတ လွမ်းဆွတ်လို့ 
ရင့်ကျက်မှုရလို့တည်ငြိမ်လာ ဒီအရွယ်မှာ... အချစ်နဲ့ပက်သက်ရင်
ရဲရင့်မှု မရှိတော့ဘူး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အရေး.. ကိုယ်အမြဲပဲတွေဝေ
ရင်ခုန်နှုန်းများလည်း နှေးကွေးလာသလိုကွယ် ဆင်ခြင်မှု အချစ်.... ထိန်းသိမ်းလို့ ချစ်တာ
ဟိုးတုန်းကလောက် မကောင်းဘူး တက်ကြွတဲ့ လွတ်လပ်အချစ် ပြန်အောင့်မေ့တယ်…
ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်းပါ။ သတိရစရာ ရှိရင် သတိရ၊ လွမ်းစရာ ရှိရင် .. အတူ လွမ်းကြဖို့ ။ လွမ်းစရာ မရှိဘူး ဆိုတောင်မှ လွမ်းချင်တယ်ဆို .. လွမ်းခွင့်ရှိတယ်ဆို... လွမ်းတတ်တယ်ဆို... လွမ်းဖို့ လည်း အချိန်ရတယ်ဆို.. အတူ လွမ်းလို့ ရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/20/2010 02:17:00 PM3comments
သီချင်းနှစ်ပုဒ်က စတဲ့ ဇာတ်လမ်း...
ဒီရက်ပိုင်း ကောင်းကောင်း မအိပ်နိုင်တော့ပါ။ ",) မအိပ်ဖြစ်တာပါ။
ခုတလော အလုပ်နည်းနည်းများတာကြောင့် အလုပ်က ၈ နာရီလောက်မှ ပြန်ဖြစ်တာ များတယ်။
အိမ်ကို ရောက်တော့ ၈း၃၀။
ည ၁၂ လောက်မှာ အိပ်ရာ ၀င်တယ်။ ဒီထက်လဲစောပြီး အိပ်မရ၊ မအိပ်ဖြစ်၊ မအိပ်နိုင်။
မနက် ၂း၃၀ လောက် တခါထ။
ချက်ချင်းအိပ်မပြောတတ်တော့ ၄း၃၀-၅း၀၀ လောက်မှာ ပြန်အိပ်။
မနက် ၈ နာရီ အလုပ်သွားဖို့ပြန်ထ။
၉ နာရီကျော် အလုပ်ရောက်တာနဲ့ပြောလိုက်၊တွေးလိုက်၊ရေးလိုက်၊ဖတ်လိုက်။
ညနေ ၆ နာရီဆိုတာ ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်း မသိလိုက်ဘူး။
နေ့ စဉ် အချိန်ပြည့် မအားရဘူး။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ လုပ်ကိုင်နေတာတွေ တချက်မှား လို့ မရဘူး။ အချိန်တိုင်း၊ မိနစ်တိုင်း၊ စက္ကန့် တိုင်းဟာ သိပ်ပြီးတန်ဖိုး ရှိနေပါတယ်။ :D
ကျွန်မ အခန်းထဲမှာ TV အသေးလေး တလုံး ရှိတယ်။ စင်္ကာပူမှာ Free လွှင့်တဲ့ ဟာတွေ ကြည့်လို့ ရတယ်။ တခြားဟာတွေ ကြည့်ချင် ဧည့်ခန်းထဲ ထွက်ကြည့်။ နောက်ပြီး ခုနေတဲ့ အိမ်ရှင်တွေက အိမ်မှာ တခြားလိုင်းတွေ ယူထားပေမယ့် ဘောလုံးပွဲ ၀ါသနာ မပါတော့ WorldCup ကြည့်ဖို့ ယူမထားဘူး။ ယူထားလဲ ဧည့်ခန်းထဲထွက် ကြည့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခု အွန်လိုင်းက ကြည့်ပါတယ်။ TVU Player နဲ့CCTV5က တရုတ် အသံထွက်နဲ့့ကြည့်နေရမယ်ဆို တချို့ အရမ်း ကြည့်ချင်တဲ့ ပွဲလောက်ပဲ ရွေးကြည့်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ကား ပွဲစဉ်တိုင်းနီးပါး မလွတ်ရဘူး...
To Watch FIFA World Cup 2010 Online(LIVE)
Special Thanks to Our Big Brother Ko Okkar (Mr Programmer) for the Link
အခုအချိန်အထိ ကျွန်မ အတွက် အဲဒီဆိုဒ်က ကြည့်ရတာ အဆင်အပြေဆုံးပါ။ Online က ကြည့်တယ် ဆိုပေမယ့် ကြည်လင်တယ်။ နှေးမနေဘူး၊ မြန်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတော့ နားလည်တယ်။ အတော်ကြီးကို အဆင်ပြေလွန်း နေပါတယ်။ ဘယ်လောက် ကြည့်လို့ ကောင်းနေလဲဆို မနက် ၂း၃၀ ပြန်ထဖို့နှိုးစက် မလိုပါဘူး။ သူ့ အလိုလို နိုးပါတယ်။
ရှေ့ ရက်တွေက ၈ နာရီပြန်တာ အဆင်ပြေပေမယ့် မနက်ဖြန်( ကြာသပတေး) နဲ့သောကြာတော့ ၇း၃၀ လောက် အိမ် အရောက်ပြန်ရမယ်။ ပြန်နိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ကြိုးစားပန်းစားအလုပ်တွေ လုပ်နေလိုက်တာ အခုဆို လုပ်စရာ အတော်များများ ပြီးသွားပြီ။ မပြီးလို့ လဲ မရဘူးလေ။ အလုပ်တွေများလည်း မကြောက်ပါဘူး။ နောက် အပတ်တနင်္လာကစပြီး အိမ်ကို ၁၀ နာရီပြန်ရောက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
အခြေအနေလား။ အားလုံးကောင်း ပါတယ်။ တကယ်ဆို ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့ခပ်ဝေးဝေး နေနိုင်အောင် ကြိုးစား နေခဲ့တာပါ။ အခုလို အရာရာအားလုံးဟာ တိုက်တွန်းနေတော့လည်း.. ၁ လပါ။ သိပ်မကြာပါဘူး။ ၄ နှစ်နေမှ တခါ။ ဒီလောက်တော့ လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပါတယ်။ အားပေးသူကလည်း အားပေးပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာဆိုဘာမှ မလိုတော့ ပါဘူး။
Posted by Nay Nay Naing at 6/16/2010 12:41:00 PM 8 comments
Wishing you the best of everythingawhole year in advance.
Happy 23rd Birthday My Little Brother!
အိမ်မှာ အငယ်ဆုံး။ အခုဆို ၂၃ နှစ်တောင် ရှိသွားပါရောလား။ ဖုန်းခေါ်လို့ မရတော့ မွေးနေ့ ဆုတောင်း အီးမေးပဲပို့ ဖြစ်တယ်။ အဖေကတော့ မောင်လေးစီ ဖုန်းခေါ်နိုင်တယ်။ မောင်လေးက အိမ်မှာရှိနေတဲ့ အမေစီ ဖုန်းခေါ်မယ် ထင်တယ်။ အိမ်ကို ဖုန်းမဆက်ကြည့် ရသေးဘူး။ အမေက သားသမီးတွေ မွေးနေ့ မှာ ထုံးစံအတိုင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု့ တွေပြုပြီး မေတ္တာပို့အမျှဝေ ပေးနေမှာ သေချာတယ်။ အဖေကလည်း အဲလိုပဲ လုပ်ပေးနေမှာပါပဲ။ သူတို့ ရဲ့ သားငယ်လေးကို အထူးသတိရ လွမ်းနေမှာ သေချာတယ်။
ညက ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ရင်း မောင်လေးကို သတိရနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် မောင်လေး လာတုန်းက မွေးနေ့အတွက်လက်ဆောင် ဘာလိုချင်လဲ၊ တစ်ပတ်လိုသေးပေမယ့် ကြိုပြီး ၀ယ်ပေးလိုက်မယ် မေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာမှမလိုဘူးတဲ့။ ဒီတော့ ဘာမှ မ၀ယ်ပေးလိုက်ဘူး။ ကိုယ်စားချင်တာတချို့ ကို မောင်လေးနဲ့လျှောက်စား လိုက်တယ်။
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 6/13/2010 11:40:00 PM3comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/11/2010 12:51:00 PM7comments
အလုပ်များတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း အတွင်း Enhancement နှစ်ခု UAT အရောက် ပေးရမယ်။ နှစ်ခုလုံးကို အပြိုင်ရေးနေရတာ လူလည်း ရူးချင်ချင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနေ့ တော့ နှစ်ခုလုံး ကို Flow အပြည့်ရေးပြီး၊ စမ်းလို့ ရသလောက် စမ်းပြီးပြီ ဆိုတော့ ၇၀% လောက်ပြီးသွားပြီလို့ပြောနိုင်မယ်။ ကျန်တဲ့ ၃၀% က တစ်ခြား System က ပို့ လိုက်တဲ့ Data တွေရမှ မှန်မမှန် စမ်းလို့ ရမယ်။ အခုဟာက တချို့ နေရာတွေ Hardcode လုပ်စမ်းထားရတယ်။ ဒါတွေ ပြန်ဖြုတ်ရတာကလည်း တစ်လုပ် ရှုပ်အုံးမယ်။
ဒီတစ်ခါရေးတဲ့ နှစ်ခုလုံးက Development Enviroement မှာ မှန်မမှန် စမ်းလို့ မရဘူး။ SIT မှာတောင် Full Function စမ်းလို့ မရနိုင်တဲ့အတွက် UAT ရောက်ပြီးမှသာ အကုန်အလုပ်လုပ်တာ မှန်မမှန် ပြောလို့ ရမယ်။ ကိုယ်စီက Data ယူမယ် System က Ready ဖြစ်နေပေမယ့် ကိုယ်စီကို Data ပို့ မယ် System ဘက်က ခုထိ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ ကံကောင်းလို့ ။ Plan အရဆို သူတို့ System က အင်္ဂါနေ့Deploy လုပ်ပြီး ကိုယ်တွေဘက်က ဒီနေ့နောက်ဆုံးထား လုပ်ပေးရမှာ။ သူတို့SIT တောင် ဒီမနက်မှ Deploy လုပ်တယ်။ ပြီးလည်းပြီးရော ကိုယ်တွေဘက်မှာ Data လုံးဝ မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ :">
ဒီ နှစ်ခု လုပ်ရမယ်ဆိုပေးထားတာ ၁ လ လောက် ရှိပြီ။ ရှေ့၂ ပတ်လောက်က လုံးဝ မရေးဖြစ်ဘူး။ သူ့Flow ကို နားလည်အောင်လုပ်ရင်း ရှိနေတဲ့ Code တွေ လိုက်ဖတ်နေရတာ နဲ့အချိန်ကုန်တယ်။ ထုံးစံ ပါပဲ။ ကုတ်တွေကလည်း ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း Data တွေ ဟိုကနေ ဒီပို့ဒီကနေ ဟိုပို့ နဲ့ ... ဒန်...တန်..တန် ဆို ဘယ်ရောက်သွား မှန်းမသိဘူး။ Business Logic တွေက အတော်ရှုပ်တယ်။ BA တွေနဲ့ ငြင်းနေရတာပဲ။ ဒါလည်း ထုံးစံပါပဲ။ ဒီတခါပို ဆိုးတာက User Requirements တွေ က မရှင်းဘူး။ အဲဒီ Department တစ်ခုလုံး လူအသစ်တွေဖြစ်သွားတော့ သူတို့ တချို့Function တွေ သေချာ နားမလည်ဘူး ထင်တယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာ Check Point လေးတွေ ရှိတယ်။ အဲလိုအနေအထားကိုရော ဘယ်လို ပြောင်းမှာလဲ ပြန်မေးမှ Requirement မှာ ပြန်ပြင် ထည့်ပေးတယ်။ တမျိုးတော့ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ ပေးတာ ရေး၊ ဒါပဲဆိုတာမျိုးဆို ပျင်းလို့သေနိုင်တယ်။ (လွန်လွန်ကျွံကျွံ ပြောကြည့်လိုက်တာ..)
မန်နေဂျာ ဒီအပတ် ခွင့်သွားနေတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီရက်ပိုင်း ဘယ်လောက် % ပြီးပြီလဲ လာလာမေးနေတာကို ပြန်ဖြေနေရတာ စိတ်ပင်ပန်းတယ်။ ကျွန်မအကျင့်ကလည်း ရှိနေတဲ့ Code တွေအကုန်ကြည့်၊ ပြောင်းရမယ့် Flow တစ်ခုလုံးသေချာနားလည်ပြီး ဘယ် File မှာ ဘယ်လို ဟာတွေ ရေးမယ်ဆိုတာမျိုး ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ Coding စပြီး ထိတတ်တာမျိုး။ ဒီတော့ ရေးပြီဆို မကြာဘူး၊ မရေးခင် ထိုင်ကြည့်နေတာက အတော်ကြာတယ်။ Enhancement ဆိုတော့ ပိုဂရုစိုက်ရတယ်။ ကိုယ်ထပ်ထည့် ရေးလိုက်တဲ့ Code တွေနဲ့အရင်ရှိနေတဲ့ပုံစံ နဲ့အရမ်းကွာနေရင် နောက်ပိုင်း တခြား လူအတွက် ပြင်ဖို့ ပြောင်းဖို လုပ်တဲ့အခါ ပိုခက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ထည့်စဉ်းစားရသေးတယ်။ စဉ်းစားနေတုန်း ဘယ်လောက် ပြီးပြီလည်းဆို ပြောရခက်တယ်။
နားလည်အောင်လုပ်နေတဲ့ အချိန်ဆို ၆နာရီကျော်တာနဲ့အိမ်ပြန်တယ်၊ Code စရေးပြီ ဆိုရင်တော့ ပြန်နောက်ကျတယ်။ ရေးလက်စ အပိုင်း တစ်ပိုင်းပြီးမှ ပြန်လေ့ရှိတော့ ၈ နာရီ ၉ နာရီ လောက်ဖြစ်သွားတာ များတယ်။ ဒီတော့ ခုရက်ပိုင်း အိမ်ပြန် နောက်ကျတယ်ပေါ့လေ။
ဒီနေ့ကြာသပတေး၊ မနက်ဖြန်ဆို သောကြာ။ ပြီးရင် ၂ ရက် နားရပြီ။ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရပြီ၊ သွားချင်တာတွေလည်း သွားလို့ ရပြီ၊ စားချင်တာတွေ စားလို့ ရပြီ၊ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်လည်း ကြည့်လို့ ရပြီ။
Posted by Nay Nay Naing at 6/10/2010 06:45:00 PM5comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/09/2010 11:00:00 AM4comments
The Spanish Historical Ship: The Nao Victoria (16th century)
Vivo City (Singapore)
ဒီမနက် Vivo City ကိစ်စရှိလို့သွားရင်း ရုပ်ရှင်တွေ၊ ကာတွန်းတွေ ထဲကလို စပိန် ရှေးဟောင်း သင်္ဘောတစ်စီး ကမ်းစပ်မှာ ရပ်ထားတာ တွေ့ ခဲ့ရတယ်။ သင်္ဘောပေါ် တတ်ကြည့်လို့ ရပေမယ့် အချိန်သိပ်မရလို့ဝင်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အပြင်က ဓာတ်ပုံနည်းနည်းပဲ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနားမှာ ဓာတ်ပုံရုိုက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ အချိန်ရတယ်၊ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို သွားကြည့် သင့်တယ်။
သင်္ဘောပေါ် တတ်ကြည့်ခွင့်ပြုတဲ့ အချိန်...
From The Nao Victoria
လက်လှမ်း မှီရာလေးတွေ ရိုက်ထားတယ်။ နေမရှိ၊ မိုးအုံ့ နေတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ မကောင်းဘူး။ အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးမယ်ဆို အဲဒီအချိန်က မိုးရွာ မနေလို့သာ ဒီဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ခေါင်းတွေ့ ခေါင်းရိုက် ... အမြှီးတွေ့အမြှီးရိုက်
အပေါ်ထပ်က လှမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှည အဲဒီနားမှာ လူသိပ် မရှိသေးဘူး။ အောက်ဘက်ရောက်တဲ့ အချိန်ကြတော့ လူတန်းက နည်းနည်း ရှည်နေပြီ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲဒီလူတန်းထဲက လူအများစုက ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ နေကြ တရုတ်ကုလားတွေ မဟုတ်ကြဘူး။
အဲဒီ စပိန်သင်္ဘောက ဟိုးရှေးဟောင်း သင်္ဘောပုံစံ တင်မကဘူး မူရင်းအရွယ် အစားအတုိုင်း ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ခရီးသည် ၂၅ ယောက် စီးနှင်းလုိုက်ပါနိုင် သိရတယ်။ နှစ်စီးဆောက်ထားတာတဲ့။ အခုတွေ့ တဲ့ Vivo မှာတွေ့ တဲ့ အစီးက ၁၆ ရာစု ပုံစံ၊ နောက်တစ်စီးက ၁၇ ရာစုပုံစံ (Name: The Galeón Andalucía)။ သင်္ဘောအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ သိချင်တယ်ဆို ဒီဆိုဒ် မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Google လုပ်ကြည့်ထားတာ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အဲဒီသင်္ဘောတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေလည်း အများကြီးတွေ့ တယ်။
Nao Victoria (16th Century)
Posted by Nay Nay Naing at 6/05/2010 04:09:00 PM6comments
You are the PROBLEM SOLVER.
You are observant and like to figure out how things work. Whenaproblem or challenge arises, you’re the go-to person.
ပြဿနာများကို ကိုယ်ရှင်းပေးပါ့မယ်။ အဲလို ပြောတာပဲ။ မှန်ချင်လည်းမှန် မမှန်ရင်လည်း မှားပေမပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် You are Problem Maker ဆိုပြီး ထွက်မလာတာ တော်ပါသေးရဲ့။
လူတွေ အကြောင်းပိုသိ ။ စိတ်ပင်ပန်းတယ် ။ တကယ့်ကိုပဲ နောက်ဆို ဒီလူတွေတော့ ။ ခုတလော အလုပ်လည်း များတယ်။ ဒါတွေ ကလည်းရှိသေး .. ဒါပေမယ့် ။ အိပ်ချိန်နည်းတော့ အစ်မကြီးကိုတော့ သတိရပါတယ် ။ အချိန်သိပ်မရဘူး ။ icons တွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်။ နောက်များမှ... ခုတော့
Posted by Nay Nay Naing at 6/02/2010 12:04:00 PM4comments